10 Best Fall Vorations in Europe | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Best Fall Vorations in Europe
(Kugcine ukubuyekezwa On: 06/02/2021)
Izinqaba zangesikhathi esedlule, izivini, namathafa obumangalisayo, yizinto ezimbalwa nje ezenza iYurophu ilungele iholide lokuwa. Wonke amadolobha aseYurophu ane-charm yayo, kodwa izindawo zethu 10 amaholide okuwela okuhle kakhulu ohlwini lwabaseYurophu abambalwa kakhulu izindawo ezinhle.
IYurophu iyamangaza kakhulu ekwindla lapho izihlahla namagquma zipendwe ngawolintshi okhanyayo, bomvu ovuthayo, futhi ophuzi. Ekupheleni kuka-Okthoba, kunezixuku ezimbalwa emigwaqweni, futhi lokhu kusho ukuthi uthola imibono enhle yokuwa konke ngokwakho. Ukuwa yisikhathi esihle sokuhamba ngoba amahhotela nezintengo zokuhamba zehla kakhulu.
Kulula futhi kukhululekile ukuhamba kuzo zonke izindawo ezimangalisa kuhlu lwethu ngesitimela. Kusuka esigodini saseLoire eFrance kuya eLuxembourg, ukuhamba kwesitimela kulungile ekuhleleni iholidi elingasoze likhunjulwe kakhulu eYurophu oke waba nalo kuze kube manje.
Izincwajana zemininingwane Travel kuyinto elula kakhulu futhi Eco-Friendly Way To Travel. This sihloko eyabhalwa sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Hamba nge- Londoloza Isitimela, Amathikithi Eshibhile Eshibhile Iwebhusayithi Emhlabeni.
1. Ukuwa Kweholide eMbria, Italy
Ngenkathi abaningi bakhetha iTuscany njengeholide lokuwa eYurophu, Isifunda sase-Umbria e-Italy sihlaba umxhwele kakhulu futhi singenye yezindawo zokuhamba ezinhle kakhulu eziseYurophu nase-Italy.
Itholakala kalula ngesitimela eseRoma, I-Umbria inikeza izixuku ezimbalwa kanye namanani entengo aphansi yokuhlala e-Italy. Ekupheleni kukaSepthemba kuya ku-Okthoba, you can enjoy the white truffle and new wine festival in towns like Gubbio. Futhi, ungaya ePerugia ngomkhosi waminyaka yonke we-Euro. Ngakho, I-Umbria imayelana nokuzikhandla emasimini amakhulu, ukujabulela ukudla okuhamba phambili newayini ngesikhathi sakho sokuvakasha e-Europe. Ngesikhathi sohambo olufushane noma olude, uhlala endaweni enothando lwekhadi leposi, kwenye yezindawo zokuvakasha ezinhle kakhulu e-Europe.
UFlorence kuya e-Orvieto amathikithi
Amathikithi eSiena kuya e-Orvieto
Amathikithi e-Arezzo ukuya e-Orvieto
Amathikithi ePerugia ukuya e-Orvieto
Izithombe eziku-inthanethi azenzi ubulungiswa ku- imilingo Cinque Terre isifunda e-Italy. Izindlu ezimibalabala eziqongweni zamagquma, uzungezwe izivini, izindawo zokudlela zasendaweni, futhi izintaba, konke kwenza lesi sifunda sibe yindawo yokuhamba emangalisayo yokuvakasha eYurophu. ICinque Terre iqukethe 8 amadolobhana amancane futhi ujantshi wesitimela uxhuma wonke komunye nomunye. Lokhu kwenza kube lula ikakhulukazi ukuhambela wonke amadolobhana akulo 2-3 izinsuku uma ufushane ngesikhathi. Yini ebingaba ngcono kunokuhamba ngesitimela ngokugxuma kwenye yezindawo ezinhle kakhulu eYurophu ekwindla?
ICinque Terre imvamisa iyindawo eshisayo yasehlobo yamabhishi namanzi aphakeme. Nokho, kungcono kakhulu ukuvakashela ukuwa, ngoba imigwaqo emincane ayinalutho kusuka kubavakashi. Ngakho-ke, ngenkathi izindawo zokudlela eziningi zivaliwe, usengathola ibha evulekile ebheke ulwandle futhi uncome ukubukwa ngokuthula.
Ungachitha 4 Izinsuku zihlola amadolobhana futhi zichithe impelasonto ende eLa Spezia, indawo yakho yokuqala yohambo lwesitimela eCinque Terre. Kusuka kuLa Spezia, uqeqesha ukuya kunoma yimuphi omunye umzana ongathanda ukuwenza.
La Spezia kuya amathikithi eManarola
Amathikithi eRiomaggiore kuManarola
ISarzana eya eManarola amathikithi
Amathikithi eLevanto kuManarola
3. Ichibi laseLugano, Switzerland
Amanzi acwebezelayo okotshani, izindlu ezinemibala ye-terracotta, Ichibi laseLugano eSwitzerland kungenye yezindawo zethu ezihamba phambili zokuwa eziwela eYurophu. ISwitzerland inezindawo eziningi ezinhle ngalelo holide elingasoze lalibaleka eYurophu kanti iLugano ingenye yamatshe aseSwitzerland.
Izinga lokushisa lisafudumele maphakathi no-Okthoba, ngakho-ke ungahlala echibini ngengilazi yeviniga evela ezivinini ezizungezile noma ukunambitha isidlo se-polenta emkhosini wasekwindla wendabuko. Uma unesifiso sokungeza isasasa ne-adventure ekuholideni kwakho e-Europe, you can hike up Monte Bre. Imibono evela esiqongweni kungenye yemibono ekhexisayo yeLugano Bay.
Idolobha Elidala LaseLugano linamakhaya asedolobheni anemibala emihle, 10 tikwele, kanye nemigwaqo yokunethezeka yaseVia Nessa. Umugqa ophansi, ILake Lugano ilungele bonke abahambi abathanda impilo nemvelo. Ichibi laseLugano liyesabeka impela ngempelasonto emfushane noma ngeholide elinwetshiwe eYurophu.
Ungahamba kalula uye echibini laseLugano ngesitimela usuka eMilan Central esikhathini esingaphezu kwehora. Izitimela zihamba njalo ngehora ukusuka esiteshini sesitimela saseMilan.
Axhume amathikithi eZurich
Lucerne kuya amathikithi eZurich
ILugano eya kumathikithi eZurich
IGeneva ukuya kumathikithi eZurich
4. Ukuwa kweholide eHannover, Germany
IHannover iyidolobha elingene kakhulu eJalimane, kodwa enye yezindawo ezinhle zokuya eholidini lokuwa eYurophu. Lo muzi omkhulu uyikhaya lepaki elikhulu, usayizi ophindwe kabili weCentral Park eNew York. Ancient oak trees and a ichibi elihle asezindaweni ezipaki, ilungele ukuhamba kwama-stropes nemini yamavila ekwindla.
IMarktplatz Old Town nombhoshongo wewashi kuyindawo enhle yokuqala ukuthola ukwakheka kwamaGothic. Ungaqhubeka nehholo elihlaba umxhwele leNew Town, isakhiwo esikhulu-esigodlweni esibheke ichibi. Amazwe nezihlahla eziluhlaza azungeza isigodlo esihle futhi aqedela umkhathi obabazekayo nokubuka ngemibala yegolide.
IHannover ingelinye lamagugu aseJalimane futhi ibingenakuba yinhle ekwindla. Uma uhlela iholide lokuyela e-Europe, bese iHannover iyindawo ekahle yokuvakasha. Ababaningi abavakashi abathole umlingo wayo okwamanje, ngakho, ungaba owokuqala ukuba nesikhathi sokuphila kwakho edolobheni.
AmaBremen eziya amathikithi e-Amsterdam
Amathikithi e-Hannover kuya e-Amsterdam
Amathikithi e-Bielefeld kuya e-Amsterdam
Amathikithi eHamburg aya e-Amsterdam
5. I-Bavaria Alps Kanye ne-Black Forest, Germany
I-Black Forest kanye neBavaria Alps ziyisinqumo esidumile seholide lomndeni lokuwa eYurophu. Lesi sifunda esimangazayo eJalimane singenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuhamba eJalimane.
Lapho usuka esitimeleni kwelinye lamadolobhana amahle, uzozizwa ngokushesha ukuthi usuqonde ngqo kwiNdaba yeFree Brothers. Amachibi amangalisayo, izingcingo zeTriberg, izigodi eziluhlaza, izivini ziqinisekisa amaholide okuwa angalibaleki eYurophu.
Amahlamvu aguqula imibala ibe ngamathoni egolide, ngenkathi ingemuva kunezintaba ezidonsa iqhwa. Ukuphumula kwikhabethe lamapulangwe ngemuva kokuhamba kakhulu ezintabeni ze-Alps kuyinto engenakulibaleka. Ungavakashela nelinye le 25 izinqaba endaweni neNewanwanstein Castle iyinqaba ephakeme ongayihlola eholidini lakho lokuwa eYurophu.
E-Offenburg amathikithi e-Freiburg
IStuttgart ithikithi laseFreiburg
I-Leipzig kuya amathikithi e-Freiburg
ENuremberg kumathikithi eFreiburg
6. Ukuwa Kweholide e-Ahornboden, Austria
Isigodi saseRissbachtal kanye IParwendel Alpine Park, ziyindawo enhle yokuvakasha e-Austria ngeholide lasekwindla. Indawo ye-Alpine ye-Ahornboden ine 2,000 Izihlahla ze-Sycamore-Maple ezineminyaka ebukekayo zigqoka ingubo yazo yasekwindla yegolide nosawolintshi. Imvelo nezintaba kudala indawo enhle ngokuphelele yendawo ekhumbulekayo yokuwa eYurophu.
Lesi sifunda eTyrol sinconyelwa ikakhulukazi ama-bikers asezintabeni nabahambi abanolwazi. I esiqiwini inezindlela eziningi ezinhle zokuhamba ngezinyawo phakathi kwezintaba ze-limestone zeholide ezingalibaleki eYurophu.
ISalzburg nje 3 amahora kude ne-Ahornboden ngesitimela, kufaka nokudluliselwa. Ngaphezu kwalokho, kukhona amadili amahle wehhotela nezindawo ongazikhetha kuzo eGrosser Ahornboden ngesikhathi esingesizini.
7. Ukuwa Kweholide esigodini saseLoire, France
TiLoire Valley itholakala esifundeni sewayini saseFrance. Lokhu kusho ukuthi 185,000 amahektare amagilebhisi avutha igolide ngasekupheleni kuka-Okthoba. Ngakho-ke kungenye yezindawo ezinhle kakhulu ongavakashela eYurophu nendawo enhle yokuvakasha yokuvakasha.
Ngenkathi abaningi bathatha uhambo losuku kusuka eParis, kunconyelwa kakhulu ukuthi uhlale impelasonto ende eLoire Valley ukwazisa ngokuphelele ngomlingo nobuhle bayo. Ngale ndlela, ungavakashela inkundla eyodwa noma ezimbili ezimangalisa esigodini, njengeChateau de Chambord. Abanye bathi le nqaba emangalisayo yaqanjwa nguDe Vinci uqobo.
I IChambord castle kuyinto 2 hours south of Paris and you can train travel from Paris Austerlitz to Blois-Chambord. Within an hour and a half, uzobe uzulazula isigodlo esihle.
EParis kuya amathikithi eStrasbourg
ILuxembourg kuya amathikithi eStrasbourg
Amathikithi eNancy kuya eStrasbourg
I-Basel eya eStrasbourg amathikithi
Akukho lutho oluhle nolothando kunaseFrance ekwindla. IBordeaux yidolobha laseFrance elingaphansi nendawo yokuhlala izivini zaseSaint-Emilion kanye namabhishi ase-Arcachon, Lezi 2 izindawo ngezinye nje zezizathu ezizokwenza uthandane neNouvelle Aquitaine eBordeaux. izigodlo, izinkambo zewayini, ukwelashwa kwe-spa, nezifundo zokupheka, yenza i-Bordeaux ibe yindawo enhle yokuvakasha yokuvakasha yakho yokuvakasha.
Ekupheleni kuka-Okthoba izivakashi eziningi zibuyele ekhaya, ngakho-ke izintengo zokuhamba nezendawo yokuhlala ziyehla eBordeaux. Ngalesi sikhathi izivini ziqala ukuvuna amagilebhisi futhi ungahlala kwesinye sezikhathi eziningi zekateau kule ndawo bese uphina ku. Lokhu ngokuqinisekile kuzokwengeza a engavamile ku-albhamu yakho yezithombe zeholide.
Lesi sifunda kuhle ukusifinyelela ngesitimela sisuka noma kuphi eFrance, futhi kukhona ngqo izitimela ngesivinini kusuka eziteshini zezitimela zaseParis-Austerlitz naseMontparnasse.
La Rochelle to Nantes amathikithi
Toulouse amathikithi eLa Rochelle
Bordeaux kuya eLa Rochelle amathikithi
EParis kuya amathikithi eLa Rochelle
9. Ukuwa Kweholide EParis, France
Iholide lethu elihle kakhulu lokuhla ohlwini lwaseYurophu ngeke liphelele ngaphandle kweParis. I-Paris ihlala ingumbono omuhle, kodwa kuyathandeka ikakhulukazi ekwindla. Luxembourg Gardens, amathofi amancane waseFrance, nomculo wasemgwaqweni obukhoma dala ukuhlelwa okuhle kweholide elingalibaleki eYurophu.
Sipisela ushokoledi oshisayo noma ubuke umkhosi wokuvuna amagilebhisi weMontmarte, I-Paris inezindawo eziningi ezinhle zokuhlwitha lezo zithombe ezinhle. Izindawo ezinokubukeka kakhulu yiJardins du Luxembourg, Parc Monceau, kanye neTuileries Garden. Kusukela ngasekupheleni kuka-Okthoba, kunomkhosi wasekwindla waminyaka yonke ezindaweni ezahlukahlukene ngaphesheya kwedolobha lomculo, ukudansa, nemisebenzi yobuciko. Ngakho, ngabe kuyana noma kuyashisa, I-Paris inikeza izinto eziningi ezinhle okufanele zenziwe.
I-Paris ayinabantu abaningi futhi amanani entengo okuhamba ayabiza kakhulu kwisizini, ngakho-ke ukuhamba kwezitimela nendawo yokuhlala kwenza iParis ibe yindawo enhle yokuhamba yokuvakasha eholidini laseYurophu.
Ngesikhathi sentwasahlobo, ama-tulips ahlobisa izingadi namapaki e-Amsterdam, kodwa ekwindla, iwolintshi, amahlamvu aphuzi nabomvu anombala wemisele nasemigwaqweni. I-Amsterdam ingubuhle ngokuphelele futhi ngenxa yalokho ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuchitha amaholide eYurophu. Ungahamba nge-Amsterdam kuphela 3 izinsuku, kodwa uzofuna ukuhlala isikhathi eside futhi ume kuwo wonke amagumbi ukwazisa ukubukwa okuhle.
I-Amsterdam ingumuzi omangalisayo weholide eYurophu, nge 50 iminyuziyamu edolobheni, isikebhe ugibele emiseleni, ziningi izinto ezinhle kakhulu ongazenza kule ndawo yokuhamba eyingqayizivele yokuhamba eNetherlands. Ngaphezu kwalokho, kukhona amapaki amangalisayo lapho ungaba nepikiniki noma bike ibhayisekili uma isimo sezulu sihle.
I-Amsterdam ingelinye lamadolobha amahle kakhulu eYurophu, kufinyeleleke ngesitimela kusuka noma kuphi emazweni angomakhelwane, futhi kulula ukuyisebenzisa ngaphakathi kwedolobha.
Am Brussels to Amsterdam amathikithi
Amathikithi eLondon aya e-Amsterdam
Berlin to Amsterdam amathikithi
Amathikithi eParis ukuya e-Amsterdam
Ibhonasi: Ukuwa Kweholide eLuxembourg
Belgium, France, futhi iJalimane izungeza izwe elincane laseLuxembourg, indawo enhle yokuvakasha yokuwa eYurophu. Idolobha laseLuxembourg lidume ngedolobha lakhona elidala, itholakala emadwaleni futhi izungezwe inqaba yangezikhathi zakudala. Ubuciko bayo obumangalisayo nobuhle basendulo bomhlaba buthole isihloko UNESCO amagugu wezwe isayithi. I-Grand Ducal Palace ne-Adolph ibhuloho yizindawo zokubona iholide lakho ukuya eLuxembourg.
Izingadi nemibono eminingi inikeza imibono ethokomayo yomuzi wonke nezungezile. ekwindla ukubukwa muhle kakhulu ngemibala ye-autumnal. Ngakho, kanti iLuxembourg iyidolobha elincane kunazo zonke eYurophu, imi ngokuziqhenya eduze kwamadolobha amakhulu ahlukahlukene njengeParis. Kuyafaneleka impela ukukhetha iLuxembourg leholide lakho eYurophu ekwindla.
Ngenxa yezinsizakalo zesitimela ezithuthukile, ungahamba noma yikuphi eYurophu ngokushesha. Kusuka edolobheni elikhulu le-cosmopolitan kuya edolobheni elincane nelimangalisayo, yonke imizi ngeyethu 10 amadolobha amahle kakhulu weholide lokuwa eYurophu, has its unique charm and magic.
AmaBrussels kumathikithi aseLuxembourg
Amathikithi eMetz ukuya eLuxembourg
Amathikithi eParis ukuya eLuxembourg
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza ekutholeni amathikithi ashibhile wesitimela kunoma iyiphi indawo enhle ohlwini lwethu.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “10 Best Fall Vorations in Europe” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit nge isixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-fall-vacations-europe%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngo isixhumanisi esilandelayo, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- lokhu kuxhumana ukuze IsiZulu imizila amakhasi okufikela, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, futhi ungangena esikhundleni se-tr uye ku-pl noma ku-nl nezilimi eziningi ozikhethayo.
Nice Carnival Futhi Izindlela To Get Kukhona